Wheelchair Seat Mabhandi Anopa Yekufambisa Yekuchengetedza
Kuchengetedzwa kwekufambisa kunofanirwa kuve yekutanga nhamba yekutanga kana uchikwira a chokufambisa wiricheya. Kuti uite kudaro, mushandisi ANOFANIRA kushandisa bhanhire rechigaro kuitira kudzivirira chero mhando yenjodzi kubva kuitika. Iyo iri nyaya iri nyore kwazvo kana zvasvika kune transport chair kuchengetedzeka, kudzivirira mushandisi kubva kuburitswa kubva pachigaro kana cheya ikasangana nebundu kana nzira isina kuenzana, mumwe anofanirwa kusunga bhandi repachigaro nguva dzese achiri muchigaro.
Kuisa panjodzi munhu anoshandisa a wiricheya nekusashandisa bhanhire rechigaro tsaona yakamirira kuitika panguva yakaipisisa. Bhandi repachigaro rakachengeteka uye rakakodzera rinofanirwa kudzivirira mushandisi kusangana nenjodzi ipi neipi kwavanogona kudonha pachigaro vazvikuvadze. Kuchengetedza ndiko kukoshesa kana zvasvika pamabhandi echigaro, asi pane zvimwe zvikonzero zvekufunga nezvazvo kana wakapfeka bhandi rechigaro.
Kuchengetedza Kwemotokari ine hwiricheya
Nyaya yechipiri inonyanya kukosha nemabhanhire echigaro ndeyekuti kana vakagarika zvakanyanya. Kusimbisa zvakanyanya, fungidzira iwe uchityaira mota uye bhandi repachigaro rinotemerwa nemutemo. Ungangoda kusunga iro bhandi repachigaro kune yasara yekufamba kwako.
Zvino chimbofungidzira uchifanira kusunga iro bhandi rechigaro maawa gumi nemaviri pazuva risingamire pasina kumbobvisa. Ndokusaka wakasununguka kwazvo bhandi rechigaro yakakosha kune wiricheya mushandisi.
Mota-Yakagadzika Seat Bhandi
Mazhinji emabhanhire echigaro anouya neimwe nzira yekuvharira michina inobatanidza maoko maviri ebhandi pamwechete kuti igadzire chisungo chakasimba chakagadzirirwa kuchengetedzeka. Vamwe vanouya vakajairika nebhanhire remota senge nyore kupusha bhatani raunogona kushandisa "kubaya" bhanhire munzvimbo, uye kusundira kana iwe uchida kubvisa bhandi repachigaro kubva kumushandisi.
Zvichienderana nekuti ndezvipi muenzaniso wewiricheya une, unogona kuwana tsika akaisa mabhandi epachigaro pamwe nekugarisa mushandisi muhombe.
Kugadzirisa Chigaro Bhandi Kureba
The chigaro upamhi cheya chigaro chako chakakoshawo zvakanyanya kana zvasvika pakureba kwetambo dzebhandi. Mazhinji emabhanhire echigaro anokutendera iwe kugadzirisa kureba kwetambo kuti igone saizi yemushandisi pasina kumanikidza yavo yepafudzi-dumbu nzvimbo.
Kunyangwe hazvo US iine mitemo inoda kuti mushandisi apfeke bhandi rechigaro mumotokari, kune mashoma chete matunhu ane mitemo inoda wiricheya mushandisi kupfeka bhandi repachigaro.